Otu onye ama ama na-echekwa nchekwa na otu nwoke na-etiti Tanzania-France na-anwu na 94
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Otu onye ama ama na-echekwa nchekwa na otu nwoke na-etiti Tanzania-France na-anwu na 94
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Tanzania na-eru uju maka ọnwụ Gérard Pasanisi
Gérard Pasanisi, onye ama ama ama ama nke mba France nke tinyere ndụ ya niile iji kwalite mmepe njem nlegharị anya na ichekwa anụ ọhịa na mba ahụ yana mmekọrịta mba ọzọ n'etiti Tanzania na France, nwụrụ na 94.
Maazị Pasanisi, onye batara na Tanzania na 1967 n'anya maka njem nleta na ichekwa anụ ọhịa, nwụrụ n'ụzọ udo na August 13, 2020, mgbe ọ rịachara obere ọrịa. A ga-eli ya na August 18 na Nice, obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ France.
Nwoke ahụ nọrọ afọ 40 na Tanzania ka ekwere na ọ wụsara ike ya n'ịzụlite ọtụtụ ijeri ndị njem na njem nleta ugbu a, na ibute ụzọ n'ichekwa anụ ọhịa, ọkachasị na mpaghara ndịda, obere oge nnwere onwe.
Mr Pasanisi bụ onye guzobere Ugwu Kilimanjaro Safari Club (MKSC), otu n'ime ụlọ ọrụ na-eme njem nlegharị anya na mba ahụ n'oge a na ntọala ya na isi obodo safari nke ugwu, Arusha.
“Anyị efuola otu nwoke nke tinyere mkpụrụ obi ya na mmepe mmepe na nchekwa anụ ọhịa na Tanzania. Anyi ga-echeta ya dika onye atumatu ya na njem nleta emeela ohere ka oru nye ndi obodo dara ogbenye ”Onye isi ochichi MKSC, Mazi George Ole Meing'arrai kwuru.
N'ezie, MKSC bụ ụlọ ọrụ ndị ọsụ ụzọ na-arụ ọrụ na ala Tanzania iji wepụta ụgbọ ala mbụ nke elektrik elekere 100 (e-ụgbọ ala) na mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka afọ abụọ gara aga, na mbido iwelata mmetọ ụgbọala n'ime ogige ntụrụndụ mba.
E-ụgbọ ala ọsụ ụzọ na-arụ ọrụ na Serengeti, ogige ntụrụndụ mba Tanzania bụ teknụzụ na-enweghị carbon, nke a pụrụ ịdabere na ya ma nwee ntụsara ahụ dabere na ogwe ọkụ anyanwụ iji wee megharịa injin ya.
Ihe nketa ya karịrị njem nleta na nchekwa. O metụtakwara ndụ ọtụtụ mmadụ site na oke ọrụ mmekọrịta ụlọ ọrụ, mmụọ nke na-eme ka ụlọ ọrụ anyị rụọ ọrụ ”Mazị Meing'arrai kwuru.
Enwere olile anya, akụkọ ihe mere eme ga-eme Mr Pasanisi ikpe ziri ezi dịka nwoke mepụtara mmekọrịta mmekọrịta mba dị n'etiti Tanzania na France n'ụzọ pụtara ìhè.
Na 1974, onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe na njem nlegharị anya, Skeikh Hasnu Makame họpụtara Mr Pasanisi dịka onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya nke Tanzania na France, andtali na Benelux, ọkwá ọ nọrọ afọ iri abụọ.
Ihe ndekọ na-egosi na n'ime afọ 20 ya, ọ haziri ma kwado ọtụtụ njegharị ọmụmụ na nleta nke ndị ozi dị iche iche nke njem, gụnyere nke nke atọ nke Prime Minister, Fredrick Sumaye, na France.
Na 1976, Mr Pasanisi nke Mịnịsta na-ahụ maka Ofesi na-ahụ, Benjamin Mkapa họpụtara ka ọ na-ebute ụzọ na mweghachi njikọta mmekọrịta dị n'etiti France na Tanzania, ọrụ ọ rụrụ nke ọma.
Na 1978, nanị afọ abụọ ka ọ nabatachara mmekọrịta mmekọrịta mba ọzọ, Mr Pasanisi jisiri ike chịkọta ego maka Tanzania iji wuo ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ na Dar es Salaam.
Nye ọtụtụ, enweghị mgbagha na mbọ ya dị iche iche, ọkachasị nkwado ọ nwetara site na Mịnịstrị nchekwa nke France maka ụzọ mgbochi ịchụ nta, mekwara njikọ dị n'etiti Tanzania na France.
Na 1985, mgbe emepere ọtụtụ ụzọ na Selous Game Reserve (50.000 Km2) n'ihi ụda ụgbọ ala Geo-source nke na-achọ mmanụ ala, enyí kpụ ọkụ n'ọnụ na-arịwanye elu.
Na 1988, na arịrịọ nke ngalaba oke anụ ọhịa Maazị Pasanisi, rịọrọ Maazị Brice Lalonde, Mịnịsta na-ahụ maka Gburugburu Ebe Obibi na France, ka France nọ n'isi European Union.
N’ihi nke a, n’oge ọgbakọ CITES na Lausanne, Switzerland, amachibidoro ịzụ ọdụ ma hụ na Mịnịstrị na-ahụ maka akụ na ụba na njem nlegharị anya machibidoro anụ ọhịa ọhịa n’ụlọ obibi na ụlọ nri ọ bụla na Tanzania.
N’afọ 1993, akpọrọ Mr Pasanisi Asọpụrụ Onye Nnọchiteanya Akpadoro nke Tanzania na France. Ọ bụkwa onye isi oche nke ndị ọrụ na-achụ nta ịchụ nta nke Tanzania (TAHOA).
Laa azụ n'afọ 2007, Tanzania hụrụ ọtụtụ enyí na-achụ nta, na-erute ọnụọgụ ọnwụ na 2012, 2013 na 2014, n'otu n'otu, na-akpali Mazi, Pasanisi ka o guzobe Foundation Na-ahụ Maka Anụmanụ nke Tanzania (WCFT).
Site na WCFT nke ya na Onye isi ala Benjamin Mkapa guzobere na mmekorita ya na onye bụbu onye isi ala France bụ Valéry Giscard d'Estaing, ihe karịrị 25 ụgbọ ala anọ na-agba agba, nwere akụrụngwa zuru oke, ka enyere na ngalaba Wildlife, afọ gara aga naanị.
"Mr Pasanisi tinyere ndụ ya n'ọgụ maka ọtụtụ agha maka Mba a, ebe mkpụrụ obi ya agaghị ahapụ" ka Mr Meing'arrai kwuru.